समीक्षा: 'टर्न हार्ट्स' क्रोन्स ए कन्ट्री म्युजिक डरावनी कथा
घर	सिनेमाचलचित्र समीक्षाहरू	समीक्षा: 'टर्न हार्ट्स' क्रोन्स ए कन्ट्री म्युजिक डरावनी कथा
by केली म्याकनी 21 सक्छ, 2022
by केली म्याकनी 21 सक्छ, 2022 2,827 हेराइहरू
न्यासभिलको संगीत दृश्यमा गहिरो सेट गर्नुहोस्, फाटेको मुटु पुरानो प्रश्न सोध्छ; तपाईं आफ्नो सपना पूरा गर्न कति टाढा जानुहुन्छ?
ब्लमहाउस टेलिभिजन र एपिक्स द्वारा निर्मित, रेचेल कोलर क्रफ्ट द्वारा लिखित, र ब्रे ग्रान्ट द्वारा निर्देशित, फाटेको मुटु एक महत्वाकांक्षी देश संगीत जोडी - जोर्डन (एबी क्विन) र लेह (एलेक्सिस लेमिरे) लाई पछ्याउँछ - आफ्नो ठूलो ब्रेक प्राप्त गर्न कोशिस गर्दै। जब अवसरले दस्तक दिन्छ, तिनीहरूले आफ्नो मूर्ति, देश संगीत लिजेन्ड हार्पर डच (केटी सागल) को निजी हवेली खोजेर आफ्नो शट शूट गर्छन्। अप्ठ्यारो रूपमा लगाइएको दक्षिणी आतिथ्यताको एक रात पछि, केटीहरू डरलाग्दो शृङ्खलाहरूमा समाप्त हुन्छन् जसले उनीहरूलाई स्टारडमको लागि जाने सीमाहरूको सामना गर्न बाध्य पार्छ।
फाटेको मुटु देश संगीत र डरावनी संयोजन; साझा जोडी होइन, तर स्वागत छ। संगीत हृदयस्पर्शी र भावपूर्ण छ, र त्यहाँ एक फोक्ससी आकर्षण छ जसले सेटिङलाई ठोस र डरलाग्दो संसारको बाहिर महसुस गराउँछ। चीजहरू खट्टा हुनु अघि, यो विधाको फिल्म हो भनेर बिर्सन धेरै सजिलो छ।
हार्परको परिचय भएपछि, त्यो वास्तविकता हतारमा आउँछ। हार्परको प्रभावकारी शक्ति भएकोले सगल। उनी भूमिकामा एकदमै उत्कृष्ट छिन्, हार्परलाई एक जोखिमसँग खेल्दै छ जसले लगभग उनको पागलपनलाई ढाक्छ। उनी चिसो र गणना गर्ने छिन्, तर आशाको आगो निभाउन पर्याप्त न्यानोपन प्रदान गर्दछ। हार्परले गाजर र स्टिक दुवै प्रस्ताव गर्दछ, एक हातले सुनौलो अवसर प्रदान गर्दछ, र अर्को हातले दिमागलाई अस्तव्यस्त पार्ने खेलहरू।
Sagal, Quinn, र Lemire मा, ग्रान्ट संग संगीतकारहरु को एक प्रतिभाशाली कलाकार छ। यसले फिल्मलाई एक पार्थिव गुण दिन्छ, र यो जान्नको लागि अझ प्रभावशाली छ कि एक विशेष अनुक्रम दृश्य फिलिम गर्दा लाइभ रेकर्ड गरिएको थियो।
ग्रान्टले उनीहरूको प्रदर्शनमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्नका लागि उनको कलाकारहरूसँग धेरै राम्रोसँग काम गर्दछ। र - जस्तै १२ घण्टाको शिफ्ट - विशेष गरी विधाको सिनेमामा, एक परिपक्व अभिनेत्रीले वास्तवमै खेल्न सक्ने बलियो भूमिका हेर्न पाउनु सधैं रोमाञ्चक हुन्छ। एक पात्रको रूपमा, हार्पर डच त्यहाँ एनी विल्क्स र पामेला वुरहिससँग हुन सक्छ। हामीलाई त्यो थप चाहिन्छ।
सेट र उत्पादन डिजाइन साँच्चै त्रुटिहीन छन्। हार्परको भव्य, हाइपर-फेमिनाइन मनोर क्यान्डी-लेपित, घर्षण रूपमा गुलाबी संस्करण जस्तै हो। बेट्स परिवार घर। यो भित्र एक पटक सुरुचिपूर्ण जीवन फिक्का भएको छ, मानौं बार्बी ड्रीम हाउसको स्वामित्वमा थियो बेबी जेन। यो आश्चर्यजनक, र अफ-पुटिङ छ, र यो अलिकति भयावह दक्षिणी आतिथ्यको लागि उत्तम सेटिंग हो।
देश र अराजकता बाहेक, फाटेको मुटु भन्न को लागी धेरै छ। यसले सम्बन्ध (व्यवसाय, पारिवारिक, र व्यक्तिगत) र महिलाहरूलाई समाजमा प्रस्तावित भूमिकाहरूमा केन्द्रित गर्दछ। हामी भगिनी तर चाखलाग्दो हुनुपर्दछ, सहयोगी तर उच्च हुनुपर्दछ, र उच्च स्तरहरू राख्नुपर्छ तर यौन रूपमा उपलब्ध हुनुपर्दछ।
त्यो भन्दा माथि, फाटेको मुटु मनोरञ्जन उद्योगको वास्तविकता र महिलाहरूलाई अनिवार्य रूपमा एकअर्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने तरिकाहरूको बारेमा हो। सबै समान सीमित अवसरहरूको लागि लडिरहेका छन्। निर्देशकको रूपमा ब्रे ग्रान्ट भन्छन्, "यो एउटा प्रणाली हो जुन हामीलाई हराउनको लागि बनाइएको हो"।
संग फाटेको मुटु, क्रफ्ट र ग्रान्टले एक पटकको प्रिय तारा आफ्नो म्याद समाप्त हुने मिति बितिसक्दा के हुन्छ, खारेज र बिर्सिँदा के हुन्छ र यसले कसैको मानसिकतामा कस्तो प्रभाव पार्छ भनेर अन्वेषण गर्छ। उनीहरूले महिलाहरूलाई कसरी अगाडि बढ्नको लागि आफूले गर्नुपर्ने सबै कुरा प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर बारम्बार बताइन्छ, तर अवसरहरूबाट पछि हट्ने कुरा प्रकाश पार्छन्। उनीहरूले महिलाहरूलाई प्रतिस्पर्धात्मक तुलनामा कसरी धकेलेका छन् र अरूले कसरी त्यसबाट लाभ उठाउँछन् भन्ने कुरालाई उजागर गर्छन्।
अन्ततः, फाटेको मुटु एक स्क्र्यापी, सेसी, रूटिन 'टूटिन' डरावनी प्रदान गर्दछ, तर एक सूक्ष्म किनाराको साथ जुन फिल्मको चरमोत्कर्षको लागि केन्द्र चरणमा तोडिन्छ। संगीत, पागलपन, र सन्देशको चंचल संयोजनले स्पटलाइटमा ठाउँको माग गर्दछ, र यो त्रासमा महिलाहरूको लागि आकर्षक नयाँ धुन हो। ब्लमहाउस टेलिभिजन र एपिक्सको स्ट्रेट-टू-स्ट्रिमिङ डरावनी फिल्महरूले नयाँ मानक सेट गरेका छन्।
तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ फाटेको मुटु अब डिजिटल मा! तलको ट्रेलर र पोस्टर हेर्नुहोस्, र हाम्रो अन्तर्वार्ताको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् निर्देशक Brea अनुदान संग।